एजेन्सी । तपाईको यति महत्वपूर्ण फोन कसैले ह्याक गर्यो भने ? तपाई झट्टै यसको समाधानका लागि लागिपर्नुहुन्छ । तर यदि तपाईको फोन ह्याक पनि भयो र तपाईलाई थाहा पनि भएन भने ?
फोनमा कुनै विन्डो खुल्नुः कयौँ पटक यस्ता भाइरस पनि हुने गर्दछन् । कहिलेकाहीँ यो विज्ञापनको रुपमा वा कहिलेकाहीँ तपाईलाई नयाँ विन्डो वा ट्याबमा लैजाने गर्दछ । कम्प्युटरको भाषामा यसलाई ‘पोप अप्स’ भनिन्छ ।